Home Wararka Alshabaab oo xalay sameeyay howlgalo ka dhacay deegaanka ceeldheere
Alshabaab oo xalay sameeyay howlgalo ka dhacay deegaanka ceeldheere
Dagaalameyaal ka tirsan Al-Shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday deegaanka Ceeldheere ee gobolka Galgaduud.
Goobjoogayaal ayaa warbaahinada maxaliga u sheegay in dagaalka uu mudo saacado ah ka socday deegaanka Ceeldheere oo u dhexeeya Magaalooyinka Dhuusamareeb iyo Guriceel ee gobolka Galgaduud.
Wararka ayaa sheegaya in Al-shabaab ay la wareegeen deegaanka Ceeldheere, inkastoo markii dambe ay isaga baxeen.
Ciidamo ka tirsan miltariga Soomaaliya ayaa gaaray deegaanka Ceeldheere, iyagoona saakay howlgalo ka wada deegaankaasi.
Ma jiraan weli wax war ah oo ka soo baxay maamulka Galmudug.